Kulesi sifundo sezithelo esiNgisini, sizofunda ukwenza imisho eyisampula ngamagama ezithelo esiNgisini, ukupelwa nokubizwa kwezithelo esiNgisini, nezithelo zesiNgisi.
Sikulungiselele ukubukwa okuhle ngezansi. Kulula ukufunda isiNgisi ngezithombe. Ungafunda kalula isihloko sezithelo ngesiNgisi ngokubukwa kwethu okumnandi nokuhehayo. Nazi izibusiso ezinhle kakhulu iNkosi yethu esinikeze zona. Okokuqala, bheka incazelo yezithelo zesiNgisi, khona-ke uzobona izithelo zesiNgisi ngokufana kwazo kwaseTurkey ohlwini. Uzofunda kabanzi ngezithelo zesiNgisi njengoba uskrolela ezansi kwekhasi lethu.
Izithelo ZesiNgisi (ezinezithombe)
TR: Uphayinaphu EN: Uphayinaphu
TR: Amagilebhisi EN: Amagilebhisi
TR: Ubhanana TR: Ubhanana
TR: I-Limon EN: Ulamula
TR: Umdwebo EN: I-Fig
TR: Ikhabe EN: Ikhabe
TR: Ibhilikosi EN: Ibhilikosi
TR: IKiraz EN: Cherry
TR: Ukhukhunathi EN: Ukhukhunathi
TR: I-Apple TR: I-Apple
TR: I-Blackberry TOP: I-Blackberry
TR: I-Quince EN: i-Quince
Amagama Esithelo Esivamile esiNgisini
Njengazo zonke izilimi, amagama ezithelo asetshenziswa kakhulu esiNgisini. Noma kunjalo, ezinye zazo zenzeka kaningi kunezinye. Lokhu kubonakala ngale ndlela elandelayo;
Kunconywa ukuthi uzifunde ngenkathi usebenza, ungazibambi ngekhanda. Ngoba ukubamba ngekhanda kuzokwenza ukuthi ukhohlwe, uma ungakuphindi ngemuva kwesikhashana. Ngakho-ke, yonke inqubo izolahleka, nesikhathi sizomoshwa.
Ngakho-ke, yikuphi ukufana kwamaTurkey kwalawa magama futhi amagama awo aphinyiselwa kanjani?
Amagama Ezithelo Nokuphinyiselwa KwesiNgisi
Isihloko sokubiza amagama singenye yezinkinga ezinkulu, ikakhulukazi phakathi kwabafundi nalabo abasha esiNgisini. Esinye sezizathu salokhu ukuthi ukunakekelwa okufanele akukakhokhelwa lolu daba. Kodwa-ke, ukuphinyiselwa okungalungile kungaba nezincazelo ezihlukile kwezinye izimo.
Izilinganiso zezithelo esiNgisini ezibalwe ngenhla nokuthi zibizwa kanjani zifana nethebula elingezansi.
Izithelo Amagama aseTurkey Ukuphinyiselwa
Ibhilikosi amabhilikosi Isizulu
I-Avacado Ukwatapheya Ukwatapheya
Ibhanana ubhanana Ukwakha
Blackberry ijikijolo Ibhande lesandla
Blueberry AmaBlueberries Bluberiy
okusamathunduluka cherry Ç kakhulu
Ukhukhunathi Ikhukhamba Ukhukhunathi
Umdwebo amakhiwane Umdwebo
Amagilebhisi amagilebhisi Greyp
Isithelo segilebhisi ubhamubhamu Greypfuriyt
ikiwi kiwi kiwi
Ilamuna Limon I-Lemin
Eluhlaza Eluhlaza I-Laym
I-Mandarin Mandarin Umswakama
i-Mango i-Mango UMengo
I-Melon ikhabe UMelın
I-nectarine Umchamo I-Nectrin
iwolintshi orange I-Orinc
I-papaya I-papaya I-Pepaya
passion Izithelo Izithelo Zokukhathazeka Phambili Furiyt
ipentshisi amapentshisi Udoti
Ipheya ubumpofu Peir
Uphayinaphu uphayinaphu I-Paynepil
ipulamu Erik UPılam
emhlophe emhlophe I-Pomegiranite
Eyishumi nanhlanu Quince Izinsimbi
Okusajingijolo raspberry URazberiy
ijikijolo strawberry Ibha yesikhala
Ikhabe ikhabe I-Wotramel
Ithebula I: Izithelo esiNgisini, isiTurkey nokubizwa kwazo
Ukufunda lokhu kuzothuthukisa ulwazimagama lwakho futhi kukwenze ukwazi ukusebenzisa ulimi ngokwengeziwe.
Ngenkathi ufunda isiNgisi, ulwazimagama lubaluleke kakhulu kanye nolwazi lohlelo lolimi. Ukuze ukhulume kahle isiNgisi, kuyadingeka ukuthi ube nesilulumagama esiphakeme. Kulesi sihloko, ungafunda okushiwo amagama ezithelo esiNgisini nokuthi uwasebenzisa kanjani engxoxweni yakho yansuku zonke.
Izithelo zesiNgisi uhlu lwamagama Ungabona izincazelo zezithelo ezisetshenziswe kakhulu. Khumbula ukufunda la magama kaningi, ngokubhala nangokukhuluma, ukwamukela ngokuphelele ukubizwa okulungile. Zijwayeze ukusho igama ngalinye ngokuzwakalayo kuzokusiza ufunde isiNgisi kalula.
Ake siqale ngephutha elijwayelekile. Ngokwesayensi yezitshalo, ukuhlukaniswa kwezitshalo njengezithelo nemifino yilokho abantu abaningi abakwazi ngokungafanele. Izithelo nemifino zihlukaniswa ngokwengxenye yesitshalo esivela kuso. Isithelo sinembewu evela ezitshalweni zayo eziqhakazayo. Imifino ivela ezimpandeni, ama-bulb, amaqabunga neziqu zesitshalo. Sivame ukuchaza ezinye zalezi zithelo ngokuthi "imifino" (isb. Utamatisi, ukwatapheya, isitshalo seqanda) kepha empeleni lezi izithelo.
Inenani lentengiso njengoba ibuye isetshenziswe ekudleni okuqediwe njengezithelo, ujamu kanye ne-marmalade. Eqinisweni, akuzona zonke izithelo ezidliwayo. Kuleli khasi, ungathola izithelo ezivamile zasekhishini nezincazelo zazo.
Izithelo Zokufunda ngesiNgisi
Qinisekisa ukuprakthiza wonke amagama amasha ohlangabezana nawo. Zama ikakhulukazi ukuphendula le mibuzo ngempilo yakho yansuku zonke ngesiNgisi.
Yikuphi kulokhu okuyizintandokazi zakho?
Ingabe kulula ukuthenga izithelo ezintsha lapho uhlala khona?
Yiziphi izithelo ongakaze uzizame?
Khipha isiqeshana sephepha ukuze uzijwayeze futhi ubhale izigaba ezimbalwa ukuthuthukisa lesi silulumagama (kuzokusiza ukuthi ukhumbule amagama kalula). Ungazijwayeza nokukhuluma ngokuzwakalayo kuwe noma nomngane.
Izithelo ngezibonelo zemisho zesiNgisi
Kunamawolintshi amane kubhasikidi.
I-Tangerine isithelo esisawolintshi.
Kufanele udle izithelo nsuku zonke.
Ngathenga ikhilogremu lama-aphula.
Ngithanda izithelo ezomisiwe.
Uthanda ukudla izithelo ezintsha.
USally uthanda ijusi yezithelo.
Lesi sithelo sinephunga elimnandi.
Kunezihlahla eziningi zezithelo engadini.
Ikhabe isithelo sasehlobo.
Okokuqala, zama ukuhumushela imisho engenhla olimini lwesiTurkey. Bese ubheke okulandelayo ukuze uhlole amaphutha akho. Incazelo yemisho ngalezi zithelo zesiNgisi imi kanje.
Ziningi izihlahla zezithelo engadini.
Izithelo zemibuzo yesiNgisi
Kuyini lokhu? - Lona iwolintshi.
Uyayithanda i-quince? - Yebo, ngithanda u-quince.
Ingabe u-Emma uyawathanda amabhilikosi? - Yebo, uyawathanda amabhilikosi.
Ungasithanda isithelo? - Yebo, ngiyacela.
Yisiphi isithelo osithanda kakhulu? - Ngithanda amawolintshi kakhulu.
Uyayihluba ukwatapheya? - Yebo nginazo.
Yisiphi isithelo osithandayo? - Izithelo engizithandayo yi-cherry.
Yimalini ikhilo lama-strawberry?
Ikhukhunathi ikhula kuphi emhlabeni?
Uwadla kanjani uphayinaphu?
Ungasithanda isithelo? - Yebo ngiyacela.
Ungakwazi yini ukuhluba i-avocado? - Yebo ngizokwenza kanjalo.
Yisiphi isithelo osithandayo? - Izithelo engizithandayo ngama cherries.
Izithelo Sample Text in English
Izithelo zilungele impilo yethu. Wonke umuntu kufanele azidle ngokujwayela. Kunezizathu eziningi zalokhu. Okokuqala, awudingi ukuwapheka. Okwesibili, kulula kakhulu ukukuthola. Okwesithathu, zine-fiber enhle kakhulu ekugayeni. Ngaphezu kwalokho, izithelo zinama-calories aphansi. Ngakho-ke awutholi isisindo. Ngaphezu kwalokho, izithelo zivimbela ezinye izifo ezifana nesifo senhliziyo nomdlavuza. Ngaphandle kwalokhu, izithelo zinamavithamini namaminerali. Okokugcina, izithelo zinokunambitheka okuhle nephunga. Unezizathu eziningi zokufaka izithelo emikhubeni yakho yokudla.
Usebenzisa uLike / Ungathandi
Uma sithi siyazithanda izithelo noma asizithandi, sisebenzisa igama elithi "thanda" ezithelo esizithandayo futhi "esingazithandi" kulabo esingazithandi.
Imisho eyisampula ngale ndaba;
I like i-apula / Inyanga yamanzi / ngithanda / ngithanda ama-apula.
Wena like quince / yu like kuins / Uthanda / thanda u-quince.
We like isitrobheli / i-wi njenge-cytrober / sithanda / sithanda ama-strawberry.
Wena like cherry / sweet cherry / you like / you like cherries.
He like banana / hi like bınena / Uthanda / uthanda ubhanana.
Yena like i-orange / shi lik orınc / Uthanda / uthanda i-orange.
They like ikhabe / Deylik malın / Bayathanda / bathanda ibhece.
Manje ake sinikeze izibonelo zemisho engemihle:
I angithandi I-Apple / angiwathandi ama-apula.
We angithandi Asithandi i-quince / i-Quince.
He angithandi iplamu / Akayithandi iplamu.
They angithandi bowler / Abayithandi ikhabe.
Wena angithandi pear / Awuthandi ipheya.
Izithelo ZesiNgisi Semfundo Ephansi
Kubafundi bamabanga aphansi, bayithanda ukufunda indaba yezithelo ngesiNgisi. Ukufunda amagama ezithelo kungaba mnandi kakhulu ezinganeni, nalu uhlu lwamagama ezithelo ngesiNgisi ongazijwayeza wona nabancane bakho.
Ikakhulukazi ezinganeni eziqala futhi zasenkulisa, ukufunda isiNgisi kungaba lula ngezingoma namavidiyo. Nayi injabulo futhi elula IsiZulu izithelo song lyrics sizokwabelana. Ungacula le ngoma nabafundi bakho noma nengane yakho ukuze bazijwayeze.
"Ingoma Yezithelo" Lyrics
Ziwolintshi futhi ziyindilinga ngiyazithanda ngempela.
Zimnandi futhi zimnandi futhi zimnandi kakhulu!
Ubhanana, Ubhanana, Ubhanana!
Zimnandi futhi ngiyintandokazi yami.
Zigobile futhi ziphuzi ngesikhumba esijiyile kakhulu.
Ubhanana bukhulu kimi!
Kunezinhlobo eziningi zezithelo.
Ungakwazi ukusho ezimbalwa?
Ubhanana, ama-Kiwis, ama-Strawberries, ama-Peaches, ama-apula.
Imibala eminingi, ubujamo nobukhulu obuhlukahlukene.
Ama-cherry, amagilebhisi, amakhabe, amapheya, uphayinaphu nokuningi!
Ama-Strawberries ayimummy ngempela.
Zingenza ngifune ukugudla isisu sami.
Zibomvu futhi zinamanzi futhi zimnandi kakhulu!
Ama-strawberry mahle kimi!
Amagilebhisi Amagilebhisi Amagilebhisi asezihlangwini!
Ziza ngemibala ehlukene, Okumnyama, Okubomvu noma Okuhlaza!
Zincane kakhulu futhi zinambitheka, Isidlwana esilula!
Amagilebhisi mahle kimi!
Ngithanda ikhabe. Isithelo esinejusi kunazo zonke.
luhlaza ngaphandle bese lubomvu ngaphakathi.
Ngithanda izingcezu zikaphayinaphu.
Zimnandi futhi zimnandi ngiyazithanda ngempela.
Ziphuzi futhi ziyingqayizivele futhi zimnandi kakhulu!
Uphayinaphu muhle kimi!
Noma ngabe uzama ukuthola izithelo zakho ozithandayo esitolo noma ufuna ukukhuluma ngokuthi yiziphi izithelo ozithandayo nongazithandi, kuzodingeka wazi amagama ezithelo ngesiNgisi. Kunamagama wezithelo ahlukahlukene okufanele uwafunde kepha lokho akusho ukuthi ngumsebenzi ongenakwenzeka, ungafunda incazelo yesiNgisi yanoma yisiphi isithelo ngesikhathi esifushane ngokufunda ezimbalwa ngasikhathi.
Njengoba wazi, ukufunda ulimi, ikakhulukazi isiNgisi, sekuzuze kakhulu namuhla. IsiNgisi esisetshenziswe emhlabeni wonke singenye yezinto ezibaluleke kakhulu kulezi. Amagama angabasizi abakhulu ekufundeni isiNgisi. Amagama amaningi aziwayo, imisho eyengeziwe engakhiwa.
Izithelo zesiNgisi ziphakathi kwezinto ezithatha isikhala esikhulu kunazo zonke, yize zingabonakala zingabalulekile isikhathi esiningi. Ngoba izithelo zesiNgisi zivame ukushiwo empilweni yansuku zonke. Yize kwaziwa ukuthi kunezithelo eziningi emhlabeni, amagama abo esiNgisi awaziwa isikhathi esiningi.
Kulokhu, kuvela inkinga enkulu uma kuzokwenziwa umusho oqukethe amagama ezithelo. Kwenza futhi kube nzima ukuqonda umbhalo oqukethe amagama ezithelo. Ngakho-ke enye yezinto zokuqala okufanele uyenze lapho ufunda isiNgisi izithelo ngesiNgisi. Uma usanda kuqala futhi ufuna indawo yazo zonke izithelo ezisohlwini, vele ubheke etafuleni lethu.
Ukuphimisa kahle zonke izilimi kubaluleke kakhulu. Ngoba ukuphinyiselwa okuyiphutha kungahle kungaqondakali ngomunye umuntu. Kulokhu, ukuxhumana ngeke kwenzeke. Ngalesi sizathu, ungafunda ukuthi uwafunde kanjani amagama abuzwayo etafuleni lethu.
Yini Okufanele Icatshangelwe Lapho Ufunda IsiNgisi?
Kunamaphutha amaningi lapho ufunda isiNgisi. Ukufunda okuyiphutha kuzothikameza inqubo yokufunda ngolimi. Ngoba kunzima kakhulu ukulungisa into engaqondakali. Abantu abaningi kulezi zinsuku bathatha izifundo zokufunda isiNgisi. Ukuthola ukuqeqeshwa okunjalo kobuchwepheshe kuzokufundisa lolu limi kahle. Noma kunjalo, akunakwenzeka ukuthola imiphumela uma ungazami ukuyifunda ngokwakho.
Ngalokhu, izinto ezifundiswe esifundweni ngalolo suku kufanele ziphindwe nsuku zonke, futhi kwenziwe umzamo womuntu siqu. Uma ushiya ukuqeqeshwa ngamanye amagama, imiphumela izoba mincane kakhulu.
Ungazifundisa Kanjani Izingane IsiNgisi?
Imfundo yolimi kufanele yenziwe ngokuhlukile phakathi kweqembu ngalinye leminyaka. Uma lokhu kunganakwa, abantu ngeke bakwazi ukuhlomula ngemfundo abazoyithola.
Lapho ufundisa isiNgisi ezinganeni, udinga ukusenza sibe mnandi futhi sibonakale ngokwengeziwe. Iningi labantu licabanga ngamavidiyo namakhathuni esiNgisi lapha. Kodwa-ke, ukusebenza kahle kokufunda ngamavidiyo kuzoba phansi, njengoba isiNgisi sezingane singakathuthuki.
Ngoba ngenkathi zifunda ulimi, izingane kufanele zihlole futhi zifunde igama abalibonayo. Isizathu esikhulu salokhu ukuthi izingane azikwazi ukulandela imibhalo engezansi nenkulumo ngasikhathi sinye.
Ngalokhu, kunconywa ukuthi uthenge amahlaya esiNgisi nezincwadi zezindaba ezilungele izingane. Njengoba izinto okukhulunywa ngazo zisuselwa ezibukweni futhi okufana nezinto zesiNgisi kubhalwe kuzo, kuzofundwa kahle. Isibonelo, lapho igama elithi "ubhanana" livela ngaphansi kwesithombe se- "banana", kuzoqondakala ukuthi liyini, noma ngabe alibhalwanga ngesiTurkey.
Ngakho-ke, izixazululo ezisebenza kangcono zizotholakala njengoba imfundo yezingane isekelwa yizibonisi. Kodwa-ke, lokhu kuyiqiniso uma izingane zincane kakhulu. Ukusekelwa kungatholakala kumavidiyo nakuma-movie esiNgisi ngenkathi ubamba ngekhanda amagama esemdala. Noma kunjalo, akufanele kube nemibhalo engezansi yaseTurkey lapha. Ngoba kuleli cala, ubuchopho buqondiswa ngokuzenzakalela lapha.
Ngaphezu kwalokho, noma ngabe uneminyaka emingaki umfundi, kufanele isetshenziswe empilweni yansuku zonke. Izingane ezincane zingasiza kakhulu ngokuzijwayeza ulwazimagama nsuku zonke nabazali bazo. Abantu beqembu elithile leminyaka ubudala bangakwenza kalula lokhu ngokuphindaphinda kwansuku zonke.
Ungayifundisa Kanjani IsiNgisi Intsha?
Izincwadi zezithombe zizwakala zilula futhi zinesithukuthezi kubo uma ukufunda ulimi kuzokwenziwa ngabantu abasha. Ngalesi sizathu, ukuze uthole ukusebenza kahle, kuyadingeka ukuthi uphendukele kokuncamelayo okwengeziwe kobuchwepheshe nokuhlukanisa izindlela. Ngalokhu, ukuqeqeshwa kolimi kuyanconywa.
Kodwa-ke, kubalulekile futhi ukuthola imfundo efanele ngenkathi ufunda ulimi. Ezikoleni, izifundo kufanele zenziwe ngendlela efanele futhi efanele, nomsebenzi wesikole kufanele uqedwe ngaphandle kokulibala. Ngaphandle kwalokho, uma kungenziwanga futhi, izingqinamba zizokhohlwa, ngakho imiphumela izobe iphansi.
Futhi kuyisixazululo esihle sokuthola ukuqeqeshwa kobungcweti ngaphandle kwezikole nokubhalisela izifundo zolimi. Ngoba labo abafundisa kulezi zikhungo bavame ukukhuluma ulimi lwabo lwebele. Ngakho-ke, abantu bangathatha izifundo ezisebenza ngokwengeziwe ngokuqondile kulabo abakhuluma ulimi lwabo. Ukubamba ngekhanda kweZwi, ngakolunye uhlangothi, kuwumsebenzi osebenzayo ongenziwa yinoma ngubani yedwa.
Kodwa-ke, akunjalo ezimweni ezinjengokufunda uhlelo lolimi kanye nokwakheka kwemisho. Njengoba lezi zingafundwa zodwa, kungakuhle kakhulu ukuthola ukuqeqeshwa kobuchwepheshe.
Ngalokhu, kunconywa ukwenza ucwaningo ngaphambi kokubhalisa esifundweni. Ngoba kunezikhungo eziningi ezihlinzeka ngemfundo yesiNgisi namuhla. Kodwa-ke, akuzona zonke ezinekhwalithi efanayo. Okudingayo ukunaka lapha ukuthi yibaphi abafundisi abahlinzeka ngoqeqesho, imibhalo abanayo nokuthi bakhuluma ulimi lwabo lwendabuko yini.
Ngakho-ke, kufanele uhlole inqubomgomo yezemfundo yesikhungo. Lolu lwazi lubhalwe kusayithi labo. Namuhla, izikhungo eziningi nezinkampani zigcina amasayithi azo. Lapha, unikeza imininingwane eningiliziwe ngabo kanye nezinsizakalo abazinikezayo. Izingqinamba ezifana nokuthi izifundo zilethwa kanjani esifundweni solimi, amahora amangaki nokuthi siyini isimo sokungena kabusha zibaluleke kakhulu.
Ngakho-ke, izinhlangano eziningi zezilimi zithumela lolu lwazi kumawebhusayithi wazo. Kungenzeka uthole lonke ulwazi oludingekayo ngokuzihlola futhi uzifunde ngokuningiliziwe.
Ukubheka konke lokhu kuzokusiza ufunde kangcono izithelo zesiNgisi nesiNgisi. Kodwa-ke, akubona bonke, njengoba sishilo, abakhawulelwe kulokhu. Konke lokhu kuzobe kunganele uma ungenzi mzamo ngokwakho.
Ngakho-ke, ukuphindaphinda amagama uwedwa ekhaya kuzokusiza ukuthi ufeze ukusebenza kahle okukhulu. Izithelo esikunikeza ngazo ngesiNgisi yizihloko ezibaluleke kakhulu ukuthi ufunde izithelo ezisetshenziswa empilweni yansuku zonke.